Medical Writings ဆေးပညာစာများ: ရွှေစာရံကို အရောက်သွားမယ်
နှမတယောက်က တင်ထာတယ်။ တိမ်တိုက်တံတား ကိုးယောက်သွားတဲ့။
ကိုးဂဏန်း နတ်မကြိုက်တဲ့နေရာသွားရင် မောင်ကျောက်ခဲပါ ခေါ်တင်သွားရတယ်။ ရွှေစာရံလား မသိဘူး။ ဂျစ်ကားလေးပေါ် လမ်းဘေးက ကျောက်ခဲတလုံးပါ တင်ခဲ့ရဖူးတာ။
ဆရာဝန်ကျွန်တော့်လည်း တချို့နေရာမှာ အဲလိုရှိထားတဲ့ပြောစကားကို လိုက်နာတတ်ပါတယ်။ Myth ခေါ် ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးပညာမှာ မမှန်တာတွေတော့ ရေးထားတာ မနည်းပါ။
ရွှေစာရံဘုရားကို မိသားစုနဲ့အတူသွားတယ်။ လောက်စာလုံးလောက်သာကြီးတဲ့ ကျောက်ခဲလေးတလုံး တင်သွားခြင်းဟာ ကားမောင်းတဲ့သူအဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ချမှုပိုစေတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကျွန်တော် မှားချင်မှားမယ်။
1. Food Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/digestive-myths.html
2. Mother’s words of wisdom အမေ့စကား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/mothers-words-of-wisdom.html
3. Myth About Babies ကလေးငယ်အတွက် မေးခွန်းများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/myth-about-babies.html
4. Myth တခါမှ မကြားဖူးသေး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/04/myth.html
5. Myths about menstrual cycle ရာသီလာခြင်း အရိုးစွဲအယူအဆများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/myths-about-menstrual-cycle.html
6. Myths of Pregnancy and Postpartum မီးတွင်းကျန်းမာရေး အယူအဆအမှားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/myths-of-pregnancy-and-postpartum.html
7. Myths အယူအဆ အလွဲများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/myth-about-babies.html
8. Old wives' tale မိန်းမကြီးများပုံပြင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/old-wives-tale.html
9. Papaya During Pregnancy သင်္ဘောသီးနဲ့ ကိုယ်ဝန် မေးခွန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/blog-post_88.html
10. Papaya During Pregnancy သင်္ဘောသီးနဲ့ ကိုယ်ဝန် မေးခွန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/blog-post_88.html
11. The Salt Myth ချိုချင်ပါလျက် ဆားတပွင့်ကဖျက် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/the-salt-myth.html
ထန်းရွက်ပုတီး - ခင်အုံးမြင့် http://www.melodlist.com/index.php?a=search&q=%E1%80%91%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8%20%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9